Meltwater Buzz Yemagariro Media Kushambadzira Suite | Martech Zone
Meltwater Buzz Yemagariro Media Kushambadzira Suite
Muvhuro, June 3, 2013 China, Gumiguru 1, 2020 Douglas Karr
Meltwater inopa yakafuma Mhedzisiro-Inotungamirwa Yemagariro Media Kushambadzira chikuva izvo zvinozivikanwa pasi rese, kunyanya muindasitiri yehukama neruzhinji
Kukudziridza akasimba mabhizinesi enharaunda nharaunda neMeltwater yemagariro midhiya kushambadzira mhinduro kuti vagadzire mabrand, kurera vanotsigira uye kutyaira mari. Meltwater yemagariro midhiya kushambadzira mhinduro inosanganisa yakadzika yemagariro midhiya kuongorora uye analytics pamwe nehukama hwakanaka hwekudyidzana kuti ubatsire iwe kugadzira mishandirapamwe yekushambadzira uye kuvaka hukama hwakadzama hwemhando munzvimbo dzese dzakakura kuti ununure chaiwo enhau midhiya ROI.
Zvimiro sezvakatsanangurwa pane Meltwater saiti:
Yemagariro Midhiya Monitoring Solutions - Wana nzwisiso kubva pasocial media nezvekuti ungakure sei bhizinesi rako neMeltwater yemagariro midhiya ekuongorora mhinduro. Ziva mafambiro aunogona kushandisa mune ako enhau enhau kushambadzira. Nzwisisa sosi yemafungiro eruzhinji kuvandudza kufurira vanhu. Wongorora mafungire eseri kweyekutsanangudza ezvemagariro kuti uchinje toni yezvako zvekushambadzira. Target yako yemagariro kushambadzira uko meseji yekambani yako inogona kuwana zvakanyanya kukwezva. Meltwater yemagariro midhiya yekutarisa mhinduro dzinobatsira iwe kusefa ruzha, kuti ugone kutarisa kune eruzhinji hurukuro dzinopa chaicho bhizinesi nzwisiso uye mukana.
Yemagariro Midhiya Strategic - Wedzera pasocial media ROI nekumisikidza yako yemagariro midhiya yekushambadzira zano pane rakadzika bhizinesi nzwisiso. Nzwisisa izvo zvinodiwa nevateereri vako nevateereri vezvenhau. Wongorora ongororo yemagariro kuti uone kuti iwe nevanokwikwidza makwanisa sei kugadzirisa izvo zvido. Ongorora nhepfenyuro yemagariro ako vateereri vako vanonyanya kushandisa kana uchitaura nezvechigadzirwa chako kuti uwedzere hunhu hwako munharaunda. Gadzira zano rezvemagariro rinoratidza ako akakosha kusiyanisa neMeltwater magariro enhau kushambadzira mhinduro kuti uwedzere iyo ROI yemasocial media kushambadzira ako.
Yemagariro Midhiya Engagement Mhinduro - Kurudzira zvakadzama zvemagariro midhiya kubatanidzwa kukurudzira brand brand. Zvemagariro midhiya kushambadzira kubudirira kunovakirwa pasocial media kuita. Kusiyana nekutepfenyura kushambadzira uye kushambadzira kwakananga, hazvina kukwana kuronga zvauchazotaura nekuita, iwe unofanirwa kufanofungidzira izvo nzanga yako yemagariro ichataura nezvazvo nekugovana. Iwe unofanirwa kukurudzira vezvenhau kubatanidzwa. Simbisa hukama hwevatengi vako nevemunharaunda nekuzvibatirira wega pachinzvimbo chemhando dzako. Chinja hurukuro kuva vatengi uye vatengi kuva brand vamiriri kuburikidza zvakadzama zvemagariro midhiya kubatanidzwa.
Yemagariro Media Ongororo - Pima budiriro yemasocial media marketing mishandirapamwe neMeltwater social media analytics mhinduro. Kubaya uye vateveri hazviratidze kukosha kwebhizimusi yehukama enhau. Meltwater vezvenhau analytics mhinduro dzinokubatsira kuti unzwisise kuti mishandirapamwe yako inokanganisa sei kutaurirana munharaunda uye kuti idzi hurukuro dzinoshandura sei kuita bhizimusi chairo kukosha Ratidza kuti kushambadzira midhiya yenhau kunozadzisa sei ako echinyakare kushambadzira kuyedza. Ita chokwadi-chakavakirwa sarudzo dzekuwedzera pasocial media kushambadzira kudzoka mukudyara neiri nani magariro midhiya analytics.
Tags: meltwatermeltwater buzzmagariro enhau analyticskubatana kwenhaupasocial media kushambadzira mhinduromagariro enhauzvemagariro vezvenhau zano
Nei Ndichivenga Akavimbika Akaundi
Kudzokorora paFacebook neAdRoll Kudzokorora